Imtixaanadda Dugsiyadda Somalia ee 2017 oo Musuqmaasuq hareeyay. – Hornafrik Media Network
Imtixaanadda Dugsiyadda Somalia ee 2017 oo Musuqmaasuq hareeyay.
ARIMAHA BULSHADAMADASHA HORNAFRIKMAQAALO
By HornAfrik	 On Jun 6, 2017
Imtixaanaadka Dugsiyadda Dalka Somalia ayaa sannadkan waxaa soo diyaarisay Wasaaradda Waxbarashadda Dawladda Somalia oo si isku mid ahna uga qaadaysay Dhamaan Dugsiyadda Dalka marka laga reebo kuwa Somali Land.
Imtixaanaadka Shahaadiga ah oo horay ay u qaadi jireen Daladaha Waxbarasho ee Dugsiyaddu ay ka tirsan yihiin ayeey sannadkan Dawladdu amartay in si isku mid ah ay u qaado Wasaaradda Waxbarashadda si loo helo Shahaadooyin Midaysan oo ay bixiso Wasaaradda Waxbarashadda. waxaana arrintan soo dhaweeyay Dhalinyarada wax barata oo u arkayay Fursad Qaali ah oo aysan helin Ardaydii ka horaysay, laakiin Daladdaha Waxbarashada iyo Dugsiyadda ayaa si hoose ugu ballamay in la musuq maasuqo Imtixaanadda.
Dabagal ay samaysay Hornafrik waxay ku ogaatay in Maamuladda Iskuuladda oo aan oggolayn in Ardaydii ay wax soo bareen ay ku dhacaan Imtixaanaadka ay siiyeen Qish ku saabsan Suáalaha Imtixaanaadku ku imaan karaan. waxay sidoo kale ka caawiyeen intii Imtixaanaadku socdeen inay Fasalka dhexdiisa ardayda qish ku siiyaan, iyadoo iska eegaya Ciidamadda Ammaanka ee loo xilsaaray illaalinta Imtixaanka.
Arday ka mida Ardaydii Imtixaanka u fariisatay ayaa u sheegay Hornafrik inay Macalimiintu kala shaqaynayeen Imitixaanka marka ay fursad helaan, isla markaana ay oggolaanayeen inay inay is qishaan. Waxaa sidoo kale la qalday Ciidamadda Ammaanka oo amar ku haystay inay Taleefoonadda ka reebaan Ardayda Imtixaanka galaysa. Waxayna taas badalkeeda u sheegeen Macalimiintu inay ardaydu soo qaataan 2 Taleefoon oo midna ay reebaan midna ay u isticmaalaan Qishka, iyagoona Su’aalaha qaarkood ay internet ka la kaashanayeen Jawaabaha Ardaydu.
Mid ka mida Macalimiinta Imtixaanadda qaadaysay oo codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in Maamulayaashu ay ku amreen inay ka shaqeeyaan sidii ay Ardaydu Imtixaanaadka ugu baasi lahaayeen, taasoo ay u arkayeen Guul iyo Magac inay iskuulkooda u soo jiidayso. Waxaana Iskuuladda qaarkood ay la macaamileen Askartii loo soo diray inay korjoogteeyaan Imtixaanaadka.
fursadda kale ee Imtixaanaadka ay u heleen Ardaydu Qishka ayaa ahayd in Goboladda Qaarkood iyo Caasimadda aysan isku jadwal ahayn Imtixaanaadku, waxaynta taasi keentay in Ardayga Boosaaso jooga ee Imtixaanka galay oo dhamaan Su’aalaha u soo gudbiyay saaxiibkiis jooga Kismaayo ama Muqdisho si uu uga sii baaraan dago Imtixaanka. waxayna taasi sababtay in Ardayda qaarkood ay Imtixaanka galeen iyagoo og dhamaan Suáalaha Imtixaanku ku imaanayo.
ka hor Imtixaanaadka Dawladda Somalia ay maamulayso waxay Iskuuladdu illaalin jireen in Ardaydu ay qishaan Imtixaanaadka, lkn hadda taas badalkeeda Macalimiinta iyo Maamuladda iskuuladda ayaa Imtixaanka ka caawinayay Ardayda. Waxaana Gudaha Fasaladda Macalimiinta loo xilsaaray inay kor joogteeyaan Imtixaanaadka ay ka caawinayeen Ardaydka inay kala shaqeeyaan Suáalaha.
Dawladda Somalia oo ku guulaysatay inay sannadkan Imtixaanaadka si isku mid ah uga qaado Iskuuladda waxay u tahay Fursad fiican oo ay ku horumarin karto Waxbarashadda Somalia. Waxaase ay tahay inay wax ka barato wixii dhacay Sannadkan.
Dagaalyahan ka tirsan Daacish oo markii ugu horeysay isku dhiibay Puntland
Somalia oo cadaysay Mawqifkeeda ku aadan Khilaafka u dhaxeeya Wadamadda Carabta.